Ahoana no ho very Weight Fast: 3 dingana tsotra, Miorina amin’ny Siansa – Health Deo
Misy fomba maro ho very be dia be ny lanjan’ny fifadian-kanina.
Na izany aza, ny ankamaroan’izy ireo dia hahatonga anao ho noana sy afa-po.
Raha toa ka tsy manana faniriana vy, dia ny hanoanana dia hahatonga anao ho kivy ireo drafitra haingana.
Ny drafitra voalaza eto dia:
Hahatonga anao hihena haingana, tsy misy hanoanana.
Hampihenana ny fahazotoan-komana be.
Manatsara ny fahasalamana metabolic tamin’izany andro izany.
Indro ny dingana tsotra 3-drafitra mba hihena fifadian-kanina.
1. Hetezo indray Siramamy sy Starches
Ny ampahany manan-danja indrindra dia ny hanapaka indray siramamy sy ny starches (carbs).
Rehefa manao izany, ny hanoanana haavon’ny hidina ary farany mihinana be kaloria vitsy.
Ary raha tokony mirehitra carbs ho an’ny angovo, ny vatanao nandrasana manomboka eny amin’ny voatahiry matavy.
Soa hafa iray entin’ny fanapahana carbs dia fa mampihena ny fankamamiantsika insuline ambaratonga, ka nahatonga ny voa mba handatsa-be loatra ny sodium sy ny rano avy amin’ny vatana. Izany Mampihena bloat sy ny rano tsy ilaina lanja (2, 3).
Tsy matetika ho very hatramin’ny 10 kilao (indraindray kokoa) tao amin’ny herinandro voalohany amin’ny fihinanana izany, na tena matavy sy ny rano lanja.
Izany dia kisary avy amin’ny fianarana mampitaha ambany-carb sy iva-matavy sakafo matavy na matavy loatra amin’ny vehivavy.
Ny vondrona carb iva-mihinana mandra-fahatokiana be, raha ny ambany-matavy calorie-tarika dia voafetra sy noana.
Hetezo ny carbs ary hanomboka hihinana vitsivitsy kokoa ho azy sy tsy misy kaloria hanoanana.
Raha tsorina, nanapaka carbs manisy fatiantoka Tsy Mifantoka matavy.
Manaisotra siramamy sy ny starches (carbs) avy amin’ny sakafo dia mampihena ny fahazotoan-komana, hampidina ny haavon’ny insuline sy hahatonga anao tsy hihena ny hanoanana.
2. Mihinàna proteinina, Fat sy legioma
Tsirairay ny iray amin’ireo sakafo ahitana ny proteinina tokony loharanom-baovao, ny matavy sy ny loharano ambany-carb legioma.
Fanorenana ny sakafo toy izany no tonga dia hitondra ny carb sotroiko ho any amin’ny soso-kevitra isan-karazany 20-50 grama isan’andro.
Trondro sy hazan-dranomasina: Salmona, trondro, makamba, sns
Hena: Beef, akoho, kisoa, ondry, sns
Atody: atody manontolo miaraka amin’ny yolk no tsara indrindra.
Ny maha zava-dehibe ny mihinana be dia be proteinina tsy azo overstated.
Izany naseho hampitombo metabolism amin’ny 80 ka hatramin’ny 100 kaloria isan’andro.
High-proteinina sakafo atao koa ny mampihena ny fanirianareo sy ny obsessive eritreritra momba ny sakafo ny 60%, hampihenana ny faniriana ny tara-alina snacking ny antsasany, ary ho anareo ka feno fa mandeha ho azy hihinana 441 vitsy kokoa ny kaloria isan’andro – fotsiny amin’ny alalan’ny fanampiana proteinina ny sakafo .
Raha ny lanja very, proteinina no mpanjakan’ny otrikaina. Fe-potoana.
Aza matahotra ny nampiditra ny vilia amin’ireo iva-carb legioma. Afaka mihinana goavam-be dia be ireo tsy handehanany ho 20-50 harato carbs isan’andro. A sakafo mifototra indrindra amin’ny hena sy ny legioma ahitana ny fibre rehetra, vitaminina sy ny mineraly tokony ho salama.
Mihinàna sakafo isan’andro 2-3. Raha tsapanao fa mitady noana ny tolakandro, sakafo manampy ny faha-4.
Aza matahotra ny mihinana sabora, toy ny miezaka manao Na ny ambany,-carb SY ambany-matavy tamin’izany andro izany dia fomba fahandro ho an’ny tsy fahombiazana. Izany dia fahatsapana fifaliana ao aminao ory sy mahafoy ny drafitra.
Mba hahitana ny fomba hivory ny sakafo, jereo ity ambany-carb drafitra sy io sakafo lisitry ny 101 salama ambany-carb fomba fanamboarana.
Vorio sakafo tsirairay avy amin’ny proteinina loharanom-baovao, ny matavy sy ny loharano ambany-carb legioma. Izany dia hametraka anao eo amin’ny 20-50 gram carb isan-karazany sy be hampidina ny haavon’ny hanoanana.
3. Lift mavesatra 3 Times isan-kerinandro
Tsy mila manao fanatanjahan-tena ho very lanja izany drafitra, fa ny soso-kevitra.
Ny safidy tsara indrindra dia ny mandeha any amin’ny fanaovana fanatanjahan-tena in-3-4 isan-kerinandro. Ve ny mafana-up, ary manainga vato sasany.
Raha vaovao ianao ho any amin’ny fanaovana fanatanjahan-tena, mangataka ny mpanazatra nandritra ny torohevitra.
Ny manainga vato, dia handoro maro kaloria ary manakana ny metabolism tsy lasa miadana kokoa, izay vokatry ny lafiny mahazatra very lanja.
Fampianarana-carb sakafo ambany mampiseho fa afaka mahazo kely mihitsy aza ny hozatra rehefa lehibe intsony dia be vatana matavy.
Raha manainga vato dia tsy safidy ho anareo, dia ny sasany manao cardio workouts toy ny mandeha, mihazakazaka, mihazakazaka, bisikileta na lomano dia ampy.
Tena tsara ny manao karazana fanoherana fampiofanana toy ny fanandratako lanja. Raha izany no tsy safidy, koa cardio workouts mandaitra.
Tsy voatery – Manaova “Carb Refeed” Indray mandeha isan-kerinandro
Afaka maka iray andro isan-kerinandro intsony izay mihinana carbs bebe kokoa. Maro ny olona kokoa Asabotsy.
Zava-dehibe ny hifikitra amin’ny loharanom-baovao ara-pahasalamana toy ny oats carb, vary, quinoa, ovy, vomanga, voankazo, sns
Fa ity iray ity ihany no ambony carb andro – raha manomboka manao azy io matetika kokoa noho ny indray mandeha isan-kerinandro ianao tsy handeha hahita fahombiazana be izany drafitra.
Raha tsy maintsy manana sakafo hanambaka ka hano zavatra salama, dia manao izany amin’ny andro-any.
Fantaro fa ny sakafo na hanambaka carb refeeds dia tsy ilaina, kanefa izy ireo dia afaka hampitombo ny sasany matavy-mirehitra toy ny leptin hormonina sy ny tiroida hormonina.
Dia hahazo lanja ny sasany mandritra ny andro refeed, fa ny ankamaroany dia ho rano lanja dia ho hahavery azy indray amin’ny manaraka 1-2 andro.
Manana andro iray isan-kerinandro izay mihinana bebe kokoa carbs azo ekena, na dia tsy ilaina.
Ahoana ny kaloria sy ny Anjaran’i Control?
Tsy ilaina ny hanisa kaloria raha mbola mitandrina ny carbs tena ambany ary tsy hiala amin’izay proteinina, matavy sy iva-carb legioma.
Na izany aza, raha tena te-hanisa azy aho, mampiasa izany fanaovana kajy.
Ampidiro ny tsipiriany, ary avy eo dia haka ny isa avy na ny “hihena” na ny “very Weight Fast” fizarana – arakaraka ny fomba fifadian-kanina tianao hihena.
Maro ireo fitaovana lehibe azonao ampiasaina mba manara-maso ny isan’ny kaloria mihinana ianao. Ity ny lisitry ny 5 calorie tranombarotra izay malalaka sy mora ampiasaina.
Ny tena tanjona izany drafitra dia ny mitandrina carbs ambany 20-50 grama isan’andro ary mahazo ny sisa ny kaloria avy amin’ny proteinina sy ny tavy.
Tsy ilaina ny hanisa kaloria ho very lanja izany drafitra. Izany no zava-dehibe indrindra ny fomba hentitra foana ny carbs ao amin’ny gram 20-50 isan-karazany.
10 Weight Loss Soso-kevitra mba ho Zavatra Mora (sy haingana kokoa)
Ireto misy toro-hevitra 10 hafa ho very lanja na dia haingana:
Get tsara ny matory alina, isan-kariva. Mahantra torimaso dia iray amin’ireo mahery indrindra mety ho antony lanja tombony, ka fikarakarana ny torimaso no zava-dehibe.
Hano ny hanina tsikelikely. Fast mpihinana mahazo lanja bebe kokoa rehefa mandeha ny fotoana. Mihinana tsikelikely mahatonga anao hahatsapa bebe kokoa sy feno boosts lanjan’ny-fampihenana ny hormonina.
Misotroa kafe na dite. Raha toa ianao kafe na dite iray mpisotro, dia misotro betsaka araka izay tianao ny kafeinina ao aminy afaka hampitombo ny metabolism amin’ny 3-11%.
Mifidiana levitra-namana sakafo (jereo ny lisitra). Sakafo sasany dia tena ilaina ho an’ny very matavy. Ity ny lisitry ny 20 ny ankamaroan’ny levitra-namana sakafo eto an-tany.
Ialao ny zava-pisotro sy voankazo sugary ranom. Ireo no tena fattening zavatra azonao ataovy ao an-tena, ary ny fisorohana azy ireo afaka manampy anao hihena.
Mihinàna avo-proteinina sakafo maraina. Mihinana sakafo maraina avo-proteinina naseho hampihenana ny fanirianareo sy ny calorie fihinanana mandritra ny tontolo andro.
Misotroa rano dia antsasaky ny ora alohan’ny sakafo. Fandinihana iray nampiseho fa rano fisotro antsasak’adiny alohan’ny sakafo nitombo levitra ny 44% ny 3 volana.
Mihinàna fibre mety levona. Asehon’ny fikarohana fa mety levona kofehy mba hampihena matavy, indrindra fa tany an-kibo faritra. Fibre fanampin-tsakafo toy ny glucomannan koa manampy.
Mihinàna ny ankamaroany rehetra, unprocessed sakafo. Base indrindra ny sakafo amin’ny sakafo manontolo. Salama kokoa izy ireo, ary be kokoa ny famenoana tsy mety mahatonga ny fihinanana sakafo be loatra.
Mandanja ny tenanao isan’andro. Fanadihadiana dia mampiseho fa ny olona izay mandanja ny tenany isan’andro no azo inoana kokoa ho very lanja sy hitandrina azy eny nandritra ny fotoana ela .
Na dia toro-hevitra bebe kokoa eto: 30 Easy Fomba very Weight Mazava (Tohanan’ny Science).
Izany no zava-dehibe indrindra ny mifikitra amin’ny fitsipika telo, fa misy vitsivitsy ny zavatra hafa azonao atao mba hanafaingana izany izy.
Ahoana Fast ho very ianao (sy ny hafa Soa)
Afaka manantena ho very 5-10 kilao ny lanjany (indraindray kokoa) tao amin’ny herinandro voalohany, dia miovaova levitra taorian’izay.
Afaka manokana very 3-4 kilao isan-kerinandro nandritra ny herinandro vitsivitsy aho, raha manao izany fotsiny.
Raha vaovao ianao ho manasatra, dia ny zavatra mety hitranga dia haingana. Arakaraka ny lanja tsy maintsy very, ny haingana kokoa ianao, dia hahavery azy.
Fa ny andro vitsivitsy voalohany, dia mety hahatsapa somary hafahafa. Ny vatanao dia mirehitra carbs Fa ireo rehetra ireo taona maro, noho izany dia afaka maka fotoana fa hatao zatra mirehitra fa tsy matavy.
Izany no antsoina hoe ny “ambany-carb gripa” na “keto gripa” ary matetika ny ao anatin’ny andro vitsivitsy. Ho ahy mila telo. Nanampy ny sasany fanampiny sira ny sakafo dia afaka manampy izany.
Taorian’ny andro vitsivitsy voalohany, ny ankamaroan’ny olona mitantara hoe mahatsiaro ho tena tsara, ary na dia bebe kokoa noho ny teo aloha hery.
Na dia teo aza am-polo taona maro ny anti-tsain’ny matavy, ny iva-carb ny sakafo kokoa ny fahasalamanao koa ny amin’ny fomba maro hafa:
Tosi-drà be kokoa.
Small, matevina LDL (ny ratsy) kolesterola midina.
Ra mitady handeha siramamy nidina teo ambany-carb sakafo.
Triglycerides mazàna hidina.
HDL (ny tsara) kolesterola miakatra.
An-tampon’ireo izany rehetra eny,-carb sakafo ambany miseho ho toy ny mora ny manaraka ho ambany-matavy sakafo.
Afaka manantena ho very lanja be dia be, fa dependson ny olona ny fomba haingana izany hitranga. Low-carb sakafo ihany koa ny manatsara ny fahasalamana amin’ny fomba maro hafa.
Tsy ilaina ny mosary ny Tenanao ho very Weight
Raha manana toe-javatra ara-pahasalamana, dia miresaha amin’ny dokotera alohan’ny fanaovana drafitra io fiovana, satria dia afaka mampihena ny mila fanafody.
Amin’ny alalan’ny fampihenana ny carbs sy fampidinana sehatra insuline, dia hanova ny hormonina tontolo iainana sy hahatonga ny vatana sy ny atidoha “te” mba hihena.
Izany mitarika ho amin’ny tanteraka nampihena komana sy ny hanoanana, fanesorana ny tena antony fa tsy ny ankamaroan’ny olona amin’ny fomba mahazatra levitra.
Izany dia voaporofo mba hahatonga anao intsony hatramin’ny 2-3 heny lanjany toy ny mahazatra ambany-matavy, calorie-voafetra sakafo.
Soa lehibe ho an’ny hafa ny manam-paharetana ry namana dia ny voalohany amin’ny rano indray mitete lanja dia afaka hitondra any amin’ny fahasamihafana be eo amin’ny ambaratonga nanomboka tamin’ny maraina.
Ireto misy ohatra vitsivitsy ao ambany-carb sakafo izay tsotra, matsiro ary afaka ho vonona ao anatin’ny 10 minitra: 7 Healthy Low-Carb Meals amin’ny 10 minitra na latsaka.
Izao drafitra, dia afaka hihinana sakafo tsara ianao mandra-feno ary mbola very iray taonina matavy. Tongasoa eto amin’ny paradisa.